स्कुल माने विद्यालय कि पसल ?
केही दिनअघि जिल्लामा नाम चलेकाे निजी शिक्षण संस्थाकाे प्रिन्सिपलसँग भेट भएकाे थियाे । उनकाे विद्यालयकाे सबैभन्दा एक्टिभ अभिभावक सरकारी विद्यालयकाे शिक्षक रहेछन् । हरेक दिन कुनै न कुनै सुझाव दिने उनलाई विद्यालयले राम्राे अभिभावककाे सूचीमा पहिलाे नम्बरमै राखेछ । कुशल अभिभावककाे ख्याति कमाएका शिक्षक आफ्नाे
वातावरण संरक्षणमा हाम्रो कर्तव्य
हाम्रो वरिपरीको जैविक तथा अजैविक तत्वहरुको समिश्रणलाई वातावरण भनिन्छ। विभिन्न बोट बिरुवा, जीवजन्तु तथा मानिस जाति जैविक हुन् भने जल, वायु तथा माटो जस्ता तत्वहरु अजैविक हुन्। यी दुई तत्वहरुको सही मात्रामा सन्तुलन रहे पारिस्थितिक प्रणालीको पनि सन्तुलन हुनेछ। मानिस जाति, पर्यावरण र यसका अरू
संस्मरण: मानिस सबै होस् तर, दृष्टिविहीन नहोस्
आमा तिमीले जन्माउँदा अपाङ्ग थिइनँ नि, जिन्दगीमा कस्तो कस्तो आइलाग्ने रै’छ नि, मान्छेको जन्म सुन्ने भएन मानिसले दु:खीको वेदना पी
प्रसंग बजेटको, सन्दर्भ समृद्धिको
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट सार्वजनिक भयो। पराम्परागत पद चिन्ह पछ्याउँदै आएको बजेटबारे विश्लेषण गर्न आवश्यक लागेन।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो विषय विज्ञताको जिम्मेवारी र सत्तारुढ पार्टीका नेता कार्यकर्ता
जे गरे पनि समाजवाद
क्रमैसँग भएको तीन वटा घटनाहरूको चर्चा गरौँ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। जसको अन्तिम अनुच्छेदमा ‘समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्‍ट्रको रूपमा स्थापितहुँदै जानेछ,’ भन्ने वाक्य परेको छ। अर्को घटना नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम बीच पार्टी एक
सगरमाथामा 'ट्राफिक-जाम', कीर्तिमानको 'पहाड' र विवादको 'थुम्को'
आज मे २९ अर्थात् सगरमाथा दिवश। सन् १९५३ मे २९ तारिखका दिन सगरमाथाको शिरमा दुई जोर पाइला टेकिएका थिए।एक जोर पाइला थिए तेन्जिङ शेर्पाका, अर्का जोर थिए सर एडमण्ड हिलारीका। त्यसयता ६६ वर्ष बितिसकेका छन्। केही वर्षयता यस दिनलाई सगरमाथा दिवशका रूपमा मनाउने गरिएको छ। यस वर्षको सगरमाथा दिवशको पूर्वसन्ध्यामा वर्ष २०
अघिल्लाे दिन मेराे माेवाइलमा घण्टी बज्याे।मैले हेरें नम्वर नयाँ थियाे।उठाउँ कि नउठाउँ मनमा दाेधार भयाे।मेरा लागि त्याे परिचित नम्बर थिएन। कक्षा ११ र १२ काे परीक्षा चलिरहेको थियो। यस्तो बेला अपरिचित नम्वर कानमा लैजानु भनेकाे, कि सिटप्लान मिलाई देऊ कि गार्डम
बन्द भयाे..., भलै त भयाे !
आज विप्लवकाे बन्द।बन्द किन भयाे? याे लेखिरहनु नपर्ला।देशका विभिन्नखाले सञ्चारमाध्यममा बन्दले जनजीवन प्रभावितलगायतका समाचार छयाप्छ्याप्ति छन्।कहीँ कतै भएका विस्फोटले त्यस क्षेत्र आसपासका नागरिकका कलेजाका पाता थर्केका हाेलान।विस्फोटका खबरले मिडियामा ठाउँ पाएकै छन्। यतिबेला विप्लवका कार्यकर्ता समीक्षा गरिरहेका
भारतमा नरेन्द्र मोदी फेरि प्रधानमन्त्री बन्छन्
मैले पहिलेका चुनावको पनि रिपोर्टिङ गरेको थिएँ। अहिलेको चुनावमा मतदाताको मनस्थिति जाँच्न गाह्रो जस्तो पर्‍यो। हुन त पहिले पनि चरणबद्ध चुनाव त हुने गरेका थिए। यस पटक सात चरणमा पाँच हप्ता लामो चुनावका क्रममा एउटा क्षेत्रमा चुनावी माहोल देखिन्छ। त्यसैसँग जोडिएको क्षेत्रमा तीन हप्तापछि चुनाव छ। त्यहाँ केही पनि मा